Horumarinta - Page 14 - Geofumadas
Tareenada waqtiga-dhabta ah ee GPS-ga
JoeSonic sheegayaa nidaamka Swiss tareenka, taas oo loo marayo signal a diray by GPS a bandhigayaa goobta-waqtiga dhabta ah ee tareenada, updated labaad kasta ... oo tani ma aha dhab deerada. Interesting, sababtoo ah waxaad arki kartaa mid kasta oo ka mid ah tareenada u dhaqaaqaya muuqaal Google ah ...
AutoDesk Shaybaarka bixinayaan $ 30 in ay isku dayaan tabo cusub oo ka shaqeynayaan Topobase. Si arrintan loo sameeyo, haddii aad tahay xubin ka mid ah tijaabiyeyaal Beta Autodesk oo aad kaalinta aad profile aad u xiiseeneyso badan oo ku saabsan Topobase barashada, waxaad heli doontaa $ 30 in shahaadooyinka hadiyad, ma, ma heli karo $ 20 kaliya 30 ugu horeysay ee xiiso u soo diraya u ...
Apps Funny ah ee Khariidadaha Google
Tag in ay jiraan noocyo hal-abuur leh, ma aha in ay ka hadli waayaan in API-ka khariidadaha Google ay ku guuleysteen inay sameeyaan shaqadooda. Msgmap waa mid ka mid ah kuwan. Magacaaga xuruufta Hollywoodka ... iyo marquee Kulan qarsoodi ah oo aan qarsoodi ahayn oo sameeya calaamadaha qiiqa ee wejiga faraskiisa. Mareegta cirfiidka leh ...
Maanta waxaa yimid war ka yimid mid ka mid ah beelaha yaryar ee ku dhawaaqay xiritaankooda; Waxay ku saabsan tahay Kamezeta, dadaal "Menéame" oo lagu dhiirigelinayo isticmaalka faylasha kml / kmz. Marka la eego warar noocan oo kale ah, oo kaliya hal sano oo qaliinka ah, waxaan la yaabanahay in tani ay sabab u tahay sababihii keenay burburkii ...
Earthmine oo ku guuleysatay Crunchies 2007
Crunchies waa abaalmarin sanadle ah oo ku saabsan tiknoolojiyada ugu fiican tiknoolajiyada internetka, oo ay abuurtay ThechCrunch oo ay maal galisay shirkadaha sida Microsofto, Sun, Adobe, Askar, Intel iyo kuwo kale. Munaasabadan ayaa sannad kasta la qabtaa, sanadka 2007 waxaa lagu soo bandhigay musharaxiinta 82,000 laga bilaabo January 10; kuwaas oo ahaa 18 Diseembar December ay doorteen 5 ...
Ka mid ah blogs aan u doortay in uu akhriyo, halkan qaar ka mid ah la soo dhaafay, waayo, dadka jecel in ay mowduucyo updated. Uruurinta iyo Geospatial James Fee vrs topic Dood martigelin. nidaamyada iyo adeegyada Map Tecnomaps Newsmap, a jiheeyaha hybrid Yahoo iyo User GIS Googlemaps Win nuqul ka mid ah buugga "Bilaabidda la ArcGIS Desktop" Google.dirson The ...
Waxaanu u diraynaa boostadan inaan kuugu mahad celino maalinta mahadnaq ee farxad leh turkey qurux badan oo ka yimid shaashadda tijaabada ah ee AutoDesk, oo laga sameeyay Addraw ... online! Turki waa shaqo ah David Falk, oo la sameeyey qalabkan kaas oo u oggolaanaya internetka in uu abuuro jaantus fudud, iyo walxaha sheyga leh wax ...
Jiilka Cusub ee Orthophotos
Inkastoo technology imaging digital ku hormartay heerka of photos photogrammetric la kamaradaha analog ay xalka ugu wanaagsan, in qayb ka mid by xalinta xun sida Orthorectification u habaysan hab in uu leeyahay in ka badan 50 sano isticmaalka. Si aad u taariikhda, shirkadaha yar ...